कानुनको पालना गर « CANDOR
« Language- controversy, myth & truth
Happy Deepawali/शुभ दीपावली »
कानुनको पालना गर
Posted by Thaneshwar on अक्टोबर 26, 2008
माओवादीलाई जनताले संविधान निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व सुम्पेका छन् । राज्यको मूल विधि बनाउने दललाई कानुनी राज्यको अपहेलना गर्ने छुट छैन । र्सार्वभौम जनता मात्रै हुन्, कानुनको दायराभन्दा माथि कोही छैन । सर्न्दर्भ माओवादी लडाकु तेस्रो डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खामउर्फविविधको हो । काठमाडौं कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका मुख्य अभियुक्त विविध रक्षामन्त्री रामबहादुर थापास“ग देखा मात्र परेनन्, उनले मन्त्रीस“ग भलाकुसारी पनि गरे । उनी प्रहरीको खोजीमा परेका अभियुक्त हुन् । आपmनै अघिल्तिर अभियुक्त उपस्थित हु“दा प्रहरी मूकदर्शक बन्यो र पक्रने हिम्मत देखिन सकेन ।
उनलाई विगत ६ महिनादेखि प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो । प्रहरीले खोजी कार्य तीव्र राखेको र पक्रन नसकेको प्रस्टीकरण दि“दै आएको थियो । अझ उसले शक्तिखोरस्थित माओवादी लडाकु डिभिजनका नाममा विविधलाई अदालतमा उपस्थित गराउन पत्रसमेत काटेको थियो तर पनि उनलाई न आफैं प्रहरीको सर्म्पर्कमा गए न त प्रहरीले पक्रन सक्यो ।
वैशाख २८ गते शक्तिखोरस्थित शिविरभित्रै माओवादी छापामारले काठमाडौंका व्यापारी श्रेष्ठलाई कुटीकुटी मारेका थिए । दर्ुइ सातापछि उनको शव त्रिशूली नदीमा फालिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । पीडित परिवारले घटनाका मुख्य अभियुक्त विविधलाई ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । नागरिक समाज र अन्य दलबाट श्रेष्ठ हत्या प्रकरणको तीव्र विरोध भएपछि माओवादी नेतृत्व आफंैले विविधलगायतका घटनामा संलग्नलाई कानुनीकारबाहीका लागि उपलब्ध गराउने वचन दिएको थियो । दर्ुभाग्य, माओवादी नेतृत्वले कानुनलाई सघाउने कुनै कदम चालेन । जनताको तत्कालीन आक्रोशलाई साम्य पार्न नेतृत्वले कारबाही गरेको बताए पनि अन्तत उनको ँरक्षाकवच’ रक्षामन्त्री भइदिए ।
पछिल्लो विविध प्रकरणले कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । एकजना अभियुक्त अदालतको कठघरामा हुनुपर्नेमा कानुनी राज्यका संरक्षकस“गै देखापर्नु घोर आपत्तिजनक विषय हो । कानुनका नजरमा सामान्य नागरिकदेखि प्रधानमन्त्री/राष्ट्रपतिसम्म उस्तै हो । यदि कसैले कानुनको दायरा नाघेर गैरकानुनी काम गर्छ भने ऊ हमेसा सजायको भागीदार हुन्छ र हुनर्ुपर्छ । माओवादी कार्यकर्ता अथवा छापामार कमान्डर भएकै आधारमा कानुनले गर्ने व्यवहार फरक हुनु हुन्न ।
युद्धकालीन समयमा माओवादी तत्कालीन राज्यव्यवस्थाविरुद्ध उत्रेका थिए । उनीहरूले तत्कालीन कानुनको सक्दो उपहास गरे । शान्ति प्रक्रिया हु“दै मूलधारको राजनीतिमा आएपछि पनि राज्यको कानुनप्रति तिनको सोचमा पुरानै धङधङी जीवित देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियाका क्रममा तिनले चन्दा, अपहरण र समानान्तर कानुनी प्रणालीलाई लागू गर्न खोज्नुले त्यस्तै संकेत गथ्र्यो । परिवेश बदलिएको छ । उनीहरू आफंै सरकारका हर्ताकर्ता भएका छन् । कानुन संरक्षण र पालनाको मुख्य जिम्मेवार पनि उनीहरू नै भएका छन् । युद्धकालको ँअराजक छवि’ मा सुधार ल्याउने माओवादीका लागि यो सबैभन्दा उचित अवसर थियो । हत्याका अभियुक्तलाई मन्त्रीहरूले संरक्षण दिने र विशेष समय दि“दै भेट्ने हो भने उनीहरूको छवि अरू धमिलि“दै जान्छ, सुध्रि“दैन । माओवादीले आफूलाई नसुधार्ने हो भने जति नै नया“ नेपालको नारा फलाके पनि त्यो निर्रथक हुने छ ।
राज्यको आधारस्तम्भ कानुन हो । कानुनको पालना गर्न नसकिए राज्यमा अराजकतन्त्र हावी हुन्छ । त्यसकारण कानुनको पालना राज्यको पहिलो र्सत हो र बन्नर्ुपर्छ । माओवादी नेतृत्वले कानुनी राज्यको पालना गरेको र सबैलाई समान व्यवहार गर्ने नजिर पेस गर्ने हो भने विविधलगायत हत्यकाण्डका अन्य अभियुक्तलाई प्रहरी र अदालतमा तत्काल उपस्थित गराउनर्ुपर्छ । कानुनीराजको पालना गर्दै अरूलाई पनि पालना गर्न प्रेरित नगर्ने हो भने गठबन्धनको प्रमुख दलप्रति जनताको विश्वास अरू घट्न सक्छ ।
courtesy: Kantipur Editorial, 26 Oct. 2008
This entry was posted on अक्टोबर 26, 2008 at 9:56 बिहान	and is filed under Maoist, Politics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.